ချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့် တရုတ် Glass Touch Wifi အဝေးထိန်းကြိုးမဲ့ခလုတ် ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
Glass Touch Wifi အဝေးထိန်းကြိုးမဲ့ Switch1.WiFi အင်တာနက်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု၊ ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် တံခါးပေါက် မလိုအပ်ပါ။2.ထိတွေ့မှု panel အတွက် 4MM crystal tempered glass ကိုအသုံးပြုပါ။3.3G/4G/WiFi.4.4.Amazon Alexa မှတစ်ဆင့် စမတ်ဖုန်းအက်ပ်တွင် ရီမုတ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည် နှင့် Google Home။
2 နှစ်အာမခံဖြင့် Glass Touch Wifi Remote Wireless Switch ကို စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
1. Glass Touch Wifi Remote Wireless Switch ၏ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
1.WiFi သည် အင်တာနက်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု၊ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက် gateway မလိုအပ်ပါ။
2. Touch panel အတွက် 4MM crystal tempered glass ကိုအသုံးပြုပါ။
3. စမတ်ဖုန်းအက်ပ်တွင် 3G/4G/WiFi မှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်မှု
4. Amazon Alexa နှင့် Google Home တို့နှင့် အလုပ်လုပ်သည်။
5. အုပ်စုတစ်ခုစီအတွက် multigroup timers ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
6. linkage ထိန်းချုပ်မှုအတွက် မြင်ကွင်းကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
7. အချိန်နှင့်တပြေးညီ အခြေအနေကို APP တွင်ပြသသည်။
8. သင့်ခလုတ်ကို သင့်မိသားစုဝင်များနှင့် မျှဝေနိုင်ပါသည်။
9. ညဘက်တွင် အချက်ပြမှုအဖြစ် လှပသောနောက်ခံမီးသည် 10.ပါဝါဖြတ်လိုက်သည်နှင့် အခြေအနေမှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည်။
2. Glass Touch Wifi အဝေးထိန်းကြိုးမဲ့ခလုတ်အတွက် အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
* Tempered glass touch panel နှင့် fire retardant PC substrate ကိုအသုံးပြုသည်။
* သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ဖက်ညီပြီး စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊
* ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။ Glass Touch Wifi အဝေးထိန်းကြိုးမဲ့ခလုတ်
*စတစ်ကာထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်းခလုတ်၊ google home၊ alexa နှင့် tuya အက်ပ်တို့ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
* ရိုးရာနံရံခလုတ်ကို လုံးဝချောမွေ့စွာ အစားထိုးပါ။
* အိမ်၊ ရုံး၊ ဟိုတယ်၊ ဆေးရုံ စသည်ဖြင့် သင့်တော်ပါသည်။
3. အဝေးထိန်းသင်ကြားရေးနည်းလမ်း Glass Touch Wifi အဝေးထိန်းခလုတ် ကြိုးမဲ့ခလုတ်
1. Glass Touch Wifi အဝေးထိန်းကြိုးမဲ့ ကြိုးမဲ့ခလုတ်အတွက် ခလုတ်တစ်ချက်ဖွင့်ပြီး သင်ယူမှုနည်းလမ်း
လက်ခံသူခလုတ်ကို ထိခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ခလုတ်သည် တစ်ကြိမ် "Di" အသံထွက်မည်ဖြစ်ပြီး ခလုတ်ကို လွှတ်ပါ၊ အဝေးထိန်းခလုတ်ကို နှိပ်ပါက အလင်းအား ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ပိတ်ရန် ရောက်ရှိနိုင်သည်။
2. သင်ကြားရေးနည်းလမ်းကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
လက်ခံသူခလုတ်ကို ထိတွေ့ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ ခလုတ်သည် "ဒီဒီ" နှစ်ကြိမ် အသံထွက်မည်ဖြစ်ပြီး ခလုတ်ကို လွှတ်ပါ၊ အဝေးထိန်းခလုတ်ကို နှိပ်ပါက ထိန်းချုပ်အလင်းရောင်ကို ဖွင့်ရန် ရောက်ရှိနိုင်သည်။ (နှစ်လမ်း တုံ့ပြန်ချက်ဖြင့် ပထမအကြိမ် သင်ယူခြင်း "ဖွင့်" တုံ့ပြန်ချက်ကုဒ်ကို ပြောင်းပါ)။
3. သင်ကြားရေးနည်းလမ်းကို ခလုတ်တစ်ချက်ပိတ်ပါ။
လက်ခံသူခလုတ်ကို ထိတွေ့ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ ခလုတ်သည် "ဒီဒီဒီ" ကို သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် အသံပြုပြီးနောက် ခလုတ်ကို လွှတ်ပါ၊ အဝေးထိန်းခလုတ်ကို နှိပ်ပါက ထိန်းချုပ်မှု မီးပိတ်ရန် ရောက်ရှိနိုင်သည်။ (နှစ်လမ်းသွား တုံ့ပြန်ချက်ဖြင့် ပထမအကြိမ် သင်ယူခြင်း "OFF" တုံ့ပြန်ချက်ကုဒ်ကို ပြောင်းပါ)။
4. အဝေးထိန်းကုဒ်နည်းလမ်းကို ရှင်းလင်းပါ။
လက်ခံသူခလုတ်ကို ထိတွေ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ခလုတ်သည် "ဒီဒီဒီဒီဒီ" လေးကြိမ်အသံမြည်မည်ဖြစ်ပြီး ခလုတ်ကိုလွှတ်ပါ၊ ပြီးမြောက်သောအဝေးထိန်းခလုတ်ကိုရှင်းလင်းပါ။
hot Tags:: Glass Touch Wifi အဝေးထိန်းကြိုးမဲ့ခလုတ်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းနေ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်
Alexa Voice Control Smart Wifi Touch Switch